‘फाटेको जुत्ता’को दुई दिनको व्यापार कति ? « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
‘फाटेको जुत्ता’को दुई दिनको व्यापार कति ?
Published On : November 5, 2017
काठमाण्डौ। शुक्रबार रिलीज भएको चलचित्र ‘फाटेको जुत्ता’ले बम्पर ओपनिङ गरेको छ । पहिलो दिन शुक्रबार आक्रामक कलेक्शन गरेको यो चलचित्र हेर्न शनिवार पनि बिहानै देखी फिल्म हलहरुमा दर्शकको भिडभाड देखिएको थियो ।
शनिवार राजधानीका हल-हलमा पुगेर कलाकार र चलचित्र टीमले दर्शकलाई धन्यवाद दिए । हल पुग्दा नायक सौगात मल्लको गज्जबको क्रेज देखिएको थियो । निर्माता अर्जुन कुमारका अनुसार, फिल्मले प्रदर्शनको दुई दिनमा एक करोडभन्दा माथि कमाउन सफल भएको छ । उनले मल्टिप्लेक्स र सिंगल दुवैमा चलचित्रको ओपनिङ राम्रो रहेको बताएका छन् ।
काठमाण्डौ बाहिर पनि ‘फाटेको जुत्ता’ले राम्रो सुरुवात गरेको बताईएको छ । यो फिल्ममा सौगात मल्ल, प्रियंका काकी, कामेश्वर चौरासिया, अनोज पाण्डे लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ । अर्जुन कुमार निर्माता रहेको यो फिल्मका निर्देशक निकेश खड्का हुन् ।
‘फाटेको जुत्ता’मा दयाहाङ राई र वर्षा राउत केमियो भूमिकामा छन् । फिल्मका गीतमा प्रवेश मल्लिक र शंकर थापाको संगीत, कविराज गहतराज र राजिव समरको कोरियोग्राफी, अष्ट महर्जनको द्वन्द्व रहेको छ ।